ဘုန်းကြီး – လှိုင်သာယာ&Hack – Android Cheats သိကောင်းစရာများ
ဘုန်းကြီး – လှိုင်သာယာ&Hack
Moncage သည် Optillusion မှ ဖန်တီးထားသော ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အရိပ်အမြွက်ပဟေဠိ စွန့်စားခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ဂိမ်းသည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော ကွက်လပ်တစ်ခုအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။, cube ၏တစ်ဖက်စီတွင်ထူးခြားသောကမ္ဘာတစ်ခုရှိသည်။: စက်ရုံဟောင်းဖြစ်ပါစေ။, အလင်းမျှော်စင်, အပန်းဖြေဥယျာဉ်တစ်ခု, သို့မဟုတ် ဘုရားကျောင်းတစ်ခု, စသည်တို့. မြင်မြင်ချင်း, ၎င်းတို့သည် ကျပန်းနှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည်။, ဒါပေမယ့် အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင်, ဤကမ္ဘာများ ချိတ်ဆက်ပုံ၏ သိမ်မွေ့ပြီး ရှုပ်ထွေးသော နည်းလမ်းများဖြင့် သင့်ကို စွဲလန်းစေလိမ့်မည်...
【စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသော Optical Illusions များဖြင့် ပဟေဋ္ဌိများကို ဖြေရှင်းပါ】
ချိတ်ဆက်မှုကို ရှာဖွေရန်နှင့် cube ၏ မတူညီသော နှစ်ဖက်ကြားရှိ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတိုင်းကို ရှာဖွေရန် သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို အသုံးပြုပြီး ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို အားမလျှော့ပါ, ထို့နောက် သင့်ရှေ့တွင် မှော်အတတ် ပေါက်ဖွားလာသည်နှင့်အမျှ စောင့်ကြည့်ပါ။.
【ဇာတ်လမ်းကိုဖော်ထုတ်ရန် ဓာတ်ပုံအားလုံးကို စုဆောင်းပါ】
ပဟေဠိတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ, ကစားသမားကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။. နောက်ခံဇာတ်လမ်းကိုဖော်ပြရန် မထင်မရှားထောင့်များနှင့် ထောင့်များမှ ဓာတ်ပုံများကို စုဆောင်းပါ။, တစ်ကြိမ်လျှင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ.
【စဉ်းစားစရာ အရိပ်အမြွက်များဖြင့် လွတ်ကင်းပါစေ】
ကစားသမားများ မပိတ်မိစေရန် ကူညီပေးသည့် လမ်းညွှန်စနစ်များစွာ ရှိပါသည်။. ဖြေရှင်းချက်အတွက် အဓိကအရာများကို မီးမောင်းထိုးပြရန် အာရုံစူးစိုက်မှုကို အသက်သွင်းနိုင်သည်။, ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစေရန် အရိပ်အမြွက်စာများ ရရှိနိုင်သော်လည်း၊. ပြီးတော့, ကျန်တာအားလုံး အဆင်မပြေရင်, အဆုံးစွန်သော ဘေးကင်းရေး အစီအစဉ်အဖြစ် ဗီဒီယို လမ်းညွှန်ချက်များကို လော့ခ်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။.
【ဆုတံဆိပ်များဖြင့် သင်၏ပဟေဋ္ဌိဖြေရှင်းခြင်းစွမ်းရည်ကို သက်သေပြပါ】
စုစုပေါင်း ရှိတယ်။ 15 ဂိမ်းတွင်အောင်မြင်မှုများ, တစ်ခုချင်းစီကို ထူးထူးခြားခြား ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ဆုတံဆိပ်တစ်ခုစီနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။. အပြည့်အစုံစုစည်းမှု 15 ဆုတံဆိပ်များသည် သင်၏ပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်းစွမ်းရည်ကို သက်သေပြရန် ပြီးပြည့်စုံသောသက်သေဖြစ်နိုင်သည်~
အမျိုးအစား: cheat နှင့် Hack သို့မဟုတ်သိကောင်းစရာများ အမှတ်အသားများ (Tags): မင်္ဂလာပါ, ဘုန်းကြီး
← Out There: Ω Edition – လှိုင်သာယာ&Hack Sniper Champions: 3D shooting – လှိုင်သာယာ&Hack →